LANONANA FANKALAZANA NY NOELY 2019 | Primature
Mahazoarivo, ny 24 desambra 2019 – Notanterahina androany ny lanonana nanamarihana ny Noely 2019 teto eto anivon’ny Primatiora, izay notarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
Fotoana izay niarahan’ny mpiasa rehetra niombom-po sy nifampirary soa, eo am-piandrasana ny figadonan’ny taona vaovao. Fotoana iray ihany koa izay mifanojo amin’ny fifaranan’ny taom-piasàna 2019 ka nanararaotan’ny Praiminisitra nanao jery todika momba ny asa vita tamin’ny fitantanana ny raharaham-panjakàna sy ny fampiharana ny fanavaozana rehetra napetraka, araka ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika sy ny fampanantenana nataony tamin’ny vahoaka Malagasy. Nasehon’ny Praiminisitra taratra tamin’izany ireo ny fepetra noraisiny teo amin’ny fanitsiana ny fomba fiasa eto amin’ny Primatiora sy ny ratsa mangaika rehetra eo ambany fitantanany mivantana.
Nisy ny fanolorana solom-bodiakoho ho an’ny Raiamandreny Praiminisitra, ary niaraka tamin’izany dia natolotra azy ihany koa ny amboara lehibe indrindra azon’ny fikambanan’ny mpanao fanatanjahan-tena eto an-toerana, tamin’ny fifanitsanana izay nokarakarain’ny ASIEF tamin’ity taona ity.
← Fitsidihana ny fokontany Mahazoarivo
Fidinana tany Anjozorobe →